Shariif oo ka dayriyay shisheeyaha iyo shirkii wada-tashiga oo maanta dhamaanaya; maxaa laga fili karaa? – Radio Daljir
Shariif oo ka dayriyay shisheeyaha iyo shirkii wada-tashiga oo maanta dhamaanaya; maxaa laga fili karaa?
Muqdisho, April 13 – Madaxwaynaha dawladda federaalka KMG ah ee Soomaaliya ayaa si kulul ugu eedeeyay beesha caalamka in ayan raalli ka ahayn nabad iyo xasillooni ka islaaxda Soomaaliya. Shariif ayaa hadalkan jeediyay xilli uu ka baaqsaday in uu ka qayb-galo shirka wada-tashiga ee ay Qaramada Midoobay ku marti-galinayso magaalada Nairobi.
Madaxwayne Shariif Sh. Axmed ayaa isaga oo xalay ka hadlaya munaasabad loo sameeyay sannad-guuradii 51-aad ee Xoogga Dalka Soomaaliyeed waxa uu uga faa’idaystay in uu si aan horay looga baran madaxda Soomaalida, uu dhalleecayn aan leex-leexad lahayn dusha uga tuuro beesha caalamka, isaga oo bannaanka u soo saaray culayska shakhsiga ah ee ay ku hayaan, tusaalayaal badanna ka bixiyay.
Madaxwayne Shariif waxa uu aad ugu dheeraaday waxa uu ku tilmaamay talooyin badan, misana is-waydaarsan, oo ay dhinacyada danaha kaleh Soomaaliya ay siiyaan xafiiiska madaxwaynaha iyo guud ahaan hoggaanka siyaasadda isaga oo wax lala yaabo ku tilmaamay sheegashada diblumaasiyiinta ay sheegtaan in ay khabiir ku yihiin arrimaha Soomaaliya. Shariif ayaa isaga oo taa beeninaya, lidkeedana muujinaya waxa uu sheegay in isaga oo madaxwaynaha Soomaaliya ah uu haddana wax badan oo cusub ka ogaaday arrimaha Soomaaliya tan iyo markii uu caynaanka dalka la wareegay.
Madaxwayne Shariif waxa uu ugu baaqay beesha caalamka in ay talada iyo go’aan-ka-gaarista masiirka ummadda u daayaan hoggaanka la doortay, halka uu shacabka Soomaaliyeedna u soo jeediyay in ay isku tashadaan. Waxa uu farta ku fiiqay in ay jiraan waddamo, sida Soomaaliya oo kale, soo maray dagaallo sokeeye balse haatan xasilloon sida Uganda, Rwanda iyo Burundi oo uu kulligood maalmo ka hor safar ku soo maray, waxana uu tilmaamay in ay haatan nabad iyo xasillooni ka jirto waayo waa ay isku tashadeen.
Hadalkan qayru-caadiga ah ee madaxwayne Shariif ayaa ku soo beegmay xilli isaga iyo xukuumadduba qaadaceen shirka wada-tashiga ee dhinacyada Soomaaliya uga socda magaalada Nairobi. Dadka wax falanqeeya ayaa ku tilmaamaya in madaxwayne Shariif uu hadalkan si kutala gal ah xilligan ugu soo beegay sifo uu shacbiyad ugu helo gulufka siyaasadeed ee uu kula jiro mucaaradkiisa hay’adaha federaalka.
Madaxwayne Shariif waxa bisha August ka sii dhamaanaya muddada sharciga ah ee wilaayaddiisa taasoo ku eg 20-ka bisha August, iyada oo hoggaankiisa loogu marti ahaa in ay ka hor muddadaas soo dhamaystiraan dastuurka federaalka isla markaana soo bandhigaan khidad cad oo uu dalku ugu gudbayo nidaam rasmi ah oo damaamanad-qaadaya siyaasad maamul iyo hoggaan ku yimid doorashooyin xor ah. Arintaas ayaa hadda u muuqata mid aan loo fadhiyin. Taa baddalkeeda ayuu madaxwayne Shariif waxa uu holliyay in uu muddo sannad ah ku darsado muddadiisa sharciga ah, taana waxa ka horyimid barlmaanka iyo maamullada ka jira Soomaaliya oo doonaya in doorasho madaxwayne la qabto ka hor bisha August ee sannadkan 2011-ka.
Waxa xusid mudan in hoggaanka barlamaanku uu isna markiisa saddex sano ku darsaday jiritaankiisa taasoo ay ku macneeyeen in barlamaanku yahay hay’adda kaliya ee sharciga ah ee dooran karta madaxwayne, sifo looga badbaado qulub siyaasadeed iyo hoggaan la’aan. Barlamaanku waxa kale oo ay ku doodayaan in sidoo kale la dooran doono guddoon barlamaan. Tallaabadaas ayaa sidoo kale waxa ka horyimid haykallada kale ee federaalka iyo dhammaan maamullada ka jira Soomaaliya oo ay ugu horeeyso dawladda Puntland,iyo waliba beesha caalamka.
Jahwareerka iyo tartanka loogu jiro xilli-kororsiga iyo ka gaashaamashada in ay burburaan hay’adaha federaalka ayaa waxa uu ka soo biloowday shirkii ay kal hore madaxda ku bohoowday urur-goboleedka IGAD ay Addis Ababa ka soo jeediyeen in xilliga loo kordhiyo barlamaanka, dabadeedna uu barlamaanku go’aan ka gaaro masiirka hay’adaha kale ee federaalka. Barlamaanka oo aan waqti badan lumin ayaa markiiba tallaabadaas ka macaashay in ay saddex sano kororsadaan cimriga, taasoo ay soo jeediyaashii iyo inta badan Soomaalidu u arkeen tallaabo fududay loo qaaday, wada-tashi ay mudneed laga gelin, isla markaana laga badbadiyay.
Waa jahwareerkaas kan keenay in ergayga gaarka ah ee Qaramada Midoobay u qaabilsan Soomaaliya Danjire Agustin Mahiga uu ku baaqo Shirka maanta (Arbaco) ku soo xirmaya Nairobi ee looga tashanayo halkii laga abbaari lahaa daawada marxaladda kala-gurka iyada oo aan la burburin hay’adaha maalka, nafta iyo waqtiga badan ku kacay ee federaalka. Inkasta oo aan la filayn in wax go’aamo ah ay ka soo baxaan shirkan, ayaa haddana waxa dhinacyada laga quud-daraynayaa in ay miiska soo saaraan talooyin u cuntami kara dhamaan saamilayda qadiyadda agoonka ah ee Soomaaliya kuwaas oo isugu jira Soomaali iyo shisheeye.